4 amayeza endalo ukunyanga intloko ebuhlungu | Bezzia
Ukufumana amayeza endalo okunyanga iintloko kukukhululeka okukhulu kubo bonke abathwaxwa zezi zigulo. Intloko encinci ingajika ibe bukhali ukuba ishiywe ingaphathwanga, eyandisa intlungu ngokuqinisekileyo, kodwa kunye nokukwazi ukuyiphatha ngokwemvelo. Kukho amayeza okunyanga iintloko, kodwa abo babandezeleka rhoqo bayazi ukuba azisoloko zisebenza.
Intloko ebuhlungu kakhulu inokunganyamezeleki, ikuthintele ukuba uqhubeke nobomi bakho njengesiqhelo. Nto leyo ngaphandle kwamathandabuzo, yingxaki enkulu kuba zininzi izibophelelo ekufuneka kujongwene nazo yonke imihla. Ngoko ke, kubalulekile ukuba amayeza endalo kunye phatha intloko ngokukhawuleza nangempumelelo. Ukuze le ngxaki ingakuthinteli ukuba uphile ubomi bakho ngokuzolileyo nangokwesiqhelo.
1 Izizathu eziqhelekileyo zentloko
1.1 Amachiza endalo okunciphisa intloko
1.2 Ioyile ezifunekayo
1.3 Thatha i-magnesium
1.4 Ukufakwa kwejinja
1.5 Faka isicelo kubanda
Izizathu eziqhelekileyo zentloko
Zininzi izizathu ezinokubangela intloko ebuhlungu, nangona eyona nto ixhaphakileyo kunye nekwabelwana ngayo kungenxa yoxinzelelo. Xa uxinzelelo luqokelela emagxeni, umhlathi, intamo kunye nentloko, intloko ebuhlungu ibonakala. Olu hlobo lwentloko idla ngokubakho kumacala omabini entloko kwaye ngaphezu kweentlungu zentloko, unokuziva unzima entanyeni, emhlathini nasemagxeni.
Ezinye iintlobo zeentloko zidibene nezinye iingxaki, ezifana nokutshintsha kombono, ukuvakalelwa kwingxolo okanye ukukhanya. Olu hlobo lwentloko lubizwa ngokuba yi-migraine, lunzima, luqhubela phambili kwaye lubuhlungu kakhulu xa luba lukhuni. Ngokuqhelekileyo iqala kwicala elinye lentloko, kungekudala emva koko idlala kwelinye icala kwaye inyusa ukuqina.
Okunye ukutya kunokubangela intloko ebuhlungu, ngoko ke ukuba uqhelene nemigraines, kufuneka ulawule ukusetyenziswa kwetshokolethi, itshizi ezinamafutha kunye neemveliso eziqukethe i-monosodium glutamate phakathi kwezithako zazo. Intloko ebuhlungu inxulumene nokusetyenziswa okuphezulu kweentlungu, ngoko ke akufanele uwasebenzise ngaphezu kweentsuku ezintathu ukuba akukho mfuneko ngokungqongqo.
Amachiza endalo okunciphisa intloko
Xa uqala ukuva intloko, kubalulekile ukuba usebenze ngokukhawuleza ukuyinqanda ukuba ingabi mandundu. Ngaphambi kokuba ujike kwiintlungu zokunciphisa intlungu, unokuzama nawaphi na amayeza endalo alandelayo, ezisebenza kanye ngendlela efanayo. Kufuneka kwakhona uthathe amanyathelo okukhusela, onokuthi uphucule ngayo intlungu, ubeke indawo ngexesha kwaye ugweme ukuhlaselwa okunzulu kweentloko.
Iioyile ezibalulekileyo zisebenza ngokwenene ekunyangeni intloko ebuhlungu, enyanisweni, zihlala zisetyenziswa abantu abangakwaziyo ukuthatha izithomalalisi zentlungu, njengabasetyhini abakhulelweyo. Ngokukodwa, iioyile ezibalulekileyo zelavender kunye nepeppermint. Ukusetyenziswa kwitempile unokuziva ukhululekile kwaye ukhululekile, ukongeza, ungayisebenzisa amaxesha amaninzi ngaphandle komngcipheko.
Le minerali iyimfuneko kwimisebenzi emininzi yomzimba, kubandakanywa ukuhanjiswa kwe-neural kunye nokusebenza ngokufanelekileyo kwenkqubo ye-nervous. Ukugcina amanqanaba alungileyo e-magnesium kuya kukunceda uphephe ukuphazamiseka kwemithambo-luvo okudala intloko ebuhlungu. Bandakanya kwindlela yakho yemikhuba enempilo ukusetyenziswa kwe i-collagen ene-magnesium, kwaye uya kuba ne-plus kunye nenkathalo kwimpilo yakho.
Ingcambu yejinja Ingumhlobo onamandla kwimpilo ngenxa yeempawu zayo ezininzi zonyango, kuba i-anti-inflammatory yendalo kwaye kukutya okucebileyo kwi-antioxidants. Ijinja ikwasebenza ekunyangeni isicaphucaphu kunye nokugabha, nto leyo ebangela intloko ebuhlungu kunye neempawu. Lungiselela ukunyuswa kwejinja xa uziva iintlungu ziqala kwaye ubandakanye ijinja kwizidlo zakho rhoqo ukuze uziphephe.
Faka isicelo kubanda
Iyeza elikhawulezayo nelilula lendalo ukulifumana xa intloko ibetha, faka ubanda nge-compress entanyeni nasentloko. Ukubanda kunciphisa ukuvuvukala kwaye kuthintele imithambo yegazi, okunceda ukunciphisa intloko ngokukhawuleza. Zonke ezi zonyango zendalo zokunyanga iintloko zisebenza kakuhle, zizame, kwaye unokunciphisa ukusetyenziswa kweziyobisi xa kuvela intloko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Iingcebiso zezempilo » 4 amayeza endalo ukunyanga intloko ebuhlungu
Amanyathelo okukhetha umculo womtshato